म बाँचेको छु! - Blogs of Sagar Prasai
म बाँचेको छु!
सन २०११ को एकदिन एकजना आखा नदेख्ने व्यक्ति आएर मलाइ एउटा नेपाली किताब दिदै भने-"यो किताब पढ्न मनलाग्यो। देखेर पढ्न सक्दिन। अडियोमा रेकर्ड गराइदिनु पर्यो।" त्यो बेला म स्वयंसेवकहरु संग मिलेर दृस्टिबिहिन व्यक्तिहरुको लागि अडियो पुस्तक बनाउने एउटा अभियान चलाउथेँ। मैले उनको किताब हेरे- निकै पुरानो थियो। कुनै एउटा समुदाय हो कि भाषाको, यस्तै केहि को इतिहास बारेमा लेखिएको थिए। जे होस्- मलाइ पढ्न रुचि नै नलाग्ने खालको किताब थियो।
त्यो बेला हाम्रा धेरै जसो स्वयंसेवकहरू प्राईभेट कलेजमा प्लस टु र ब्याचलर्स पढिरहेका विद्यार्थीहरू थिए। उनीहरू मध्य धेरै जना नेपाली भन्दा अँग्रेजी किताब नै रेकर्ड गरिदिन रुचाउँथे। बचेका केहि नेपाली पनि पढ्न सक्छु भन्ने साथीहरू सबैले १/२ दिन अगाडी नै आ-आफ्नो भागका कितावहरू लगिसकेका थिए।
अब बाँकि म नै थिएँ। मलाई त्यो किताब पढ्ने मनै थिएन। मन नलागी नलागी भए नि त्यो किताब रेकर्ड गर्न थाले। फेरी त्यो काम मा मन लागे पनि नलागे पनि अर्को मान्छेले सुन्दा प्रस्ट बुझ्ने गरी रेकर्ड गर्नुपर्ने भएकाले मेरो लागी चुनौति थपियो। बिस्तारै बिस्तारै हरेकदिन १० पेज -१२ पेज गर्दै २०-२२ दिन जतिमा मैले त्यो पुरै किताब रेकर्ड गरेर सकाएँ।
त्यो किताब रेकर्ड गरिसकेपछि मैले ती कितावधनीलाई फोन गरेँ र किताब तयार भएकाले लिन आउनु है भनेँ। भोलिपल्ट म दशबजे अफिस पुग्दा ती मान्छे त अफिस आइवरी मलाई कुरेर बसेका रहेछन्। मैले उनीसँग पहिलो पल्ट बोल्ने बित्तिकै उनले आफ्नो नोकियाको ई-७२ मोबाईल मलाई दिदै भने- "सर यसमा हाल्दिनुस है त्यो किताबको फाईल।"
मैले उनले भनेजसरी उनको मोबाईलमा त्यो किताबको अडियो फाईलहरू राखिदिएँ। उनले मोबाईल पाउने बित्तिकै, ईअरफोन जोडे अनि त्यहि रिसेप्सनमा राखिएको एउटा कुर्सीमा बसेर सुन्न थाले। मलाई अचम्म लाग्यो- "कस्तो विधि हतार!"
त्यो किताब सुन्न थालेको केहि मिनेटमा नै ती व्यक्तिको अनुहार चम्किलो भयो। उनी एकदमै खुशी भए। उनी बेला बेला मोबाईलको बटन पनि थिच्दै हुन्थे- सायद अर्को अर्को पाठ सुनेका होलान्। बेला बेला, ठुलो स्वरमा नै भन्थे- "ओहो यो पनि रैछ।" त्यो किताब उनको लागी ठुलो महत्वको रहेछ भनेर बुझ्न कठिन भएन।
त्यसरी १५ मिनेट जति त्यो किताबका बिभिन्न भाग सुनेपछि ती व्यक्तिले मेरो हात समाए र भने-"यो किताब मेरो हजुरवुवाले लेख्नुभएको हो सर। म नजन्मिदै छापिएको रे। मलाई जहिले हजुरवुबाले मैले किताबमा यस्तो लेखेको छु, उस्तो लेखेको छु भन्नु हुन्थ्यो। तर जहिले अन्त्यमा चाहि- के गर्नु तैले पढ्न सक्दैनन् बाबु भनेर उदास हुनुहुन्थ्यो।"
उनको कुराले मेरो मन भरिएर आयो। मुटु नै ढुक्क फुले जस्तो भयो।
उनले अगाडी भने-"तपाईहरूले यो किताब रेकर्ड गरेर मलाई ठुलो रिन लगाउनु भयो सर। मेरो हजुरवुवा त बित्नुभयो तर वहाँले मलाई भन्नुभएको यो धेरै कुरा यी किताबका पाठमा छन्। यी सुनेर म मेरो हजुरवुबा सँग भएजस्तो महशूश गर्नेछु।"
उनले यति भनिसक्दा मेरो आँखा भरिए जस्तो भयो।
उनले अन्तमा भने सर-"धन्यवाद सर, मलाई यस्तो खूशी दिनुभयो।"
ती व्यक्ति त्यहाँबाट बिदा भएपछि पनि निकै दिन सम्म मलाई त्यो कुराले छोईरह्यो। त्यो किताब सुन्दा उनको अनुहारमा टल्केको खुशीले मलाई त्यतिका दिन सम्म अल्छी लागी लागी त्यो किताब पढेको "दुख" बिर्साईदियो।
अँग्रेजी लेखक जोन बुन्यानले भनेका छन् – "तिमी तब मात्रै बाँचेका हुन्छौँ, जब तिमीले कोहि यस्तो व्यक्तिको लागी केहि गर्यौ, जसले तिम्रो गुन कहिले तिर्न सक्दैन।" ती व्यक्तिलाई उनको हजुरवुवाले लेखेको किताबलाई सुन्न मिल्ने बनाएर दिएपछि, उसको अनुहारमा आएको खुशीले मलाई अहिले सम्म पनि म बाँचेको छु है भन्ने आभास दिलाउँछ।